IFTIINKACUSUB.COM: Saxaafad u dhaqmaysa sida sirdoonka !!
Saxiibayaal waxaa baryahan inagu soo badanaaya saxaafad u dhaqmaysa sida sirdoonka taasoo aad mooddo hanaanka iyo habka ay u shaqaynayaan in uu yahay amma uu u eeg-yahay sida ay u shaqeeyaan hay-adaha sirdoonku.
Laamaha sirdoonka iyo danbi-baadhistu waxa ay leeyhiin qaab ay dadka ku waraystaan ,waxna ku waydiiyaan oo u gaar ah, shaqada sirdoonka waxaa ka mid ah in ay daba gali karaan cidii ay isleyihiin dinbi ayay faraha kula jiraan.
Hadaba waxaa baryahan soo muuqanaya saxafada qaar ka mida ,oo marka ay cid waraysanayaan amma wax ka sheegayaan aad moodo in ay ula dhaqmayaan sidii danbi baadhis ay yihiin oo kale ,mararka qaarna waxabad arkaysaa saxaafad si gaar ah u daba dhiganaysa shakhsi ay dhici karto in ay si gaar ah wax uga dhaxeeyaan.
Waxa aan in badan daawaday amma aan akhristay warbaahin aad moodo marka dhinac laga eego in qaabkan ay wax u waraystaan in uu yahay kii lagu yaqanay hay-adaha ku shaqada leh sirdoonka ,balse aanu ahayn kii saxafadda .
Hay-adaha sirdoonka ayaa waxa lagu yaqanaa in ay raadiyaan,daba-gal xoogana ku sameeyaan cidkasta oo ay isleeyihiin danbi ayay faraha kula jirtaa,balse taas waxaaba kasii daran saxaafad iyaduna sidaas oo kale u dhaqmaysa oo baryahan danbe aad moodo in ay inagu soo badanayso.
Warbaahinteena qaar ka mida ,waxa aad in badan ku arkaysaa ,iyaga oo daba galaya amma doonaya in ay wax ka ogadaan arimo qof u gaar ah ,sababta oo ah waxa laga yaaba in qofkaasi iyo saxafadaasi ay noqdeen kuwo xurgufi dhextaalo.
Xaq u malaha qofka wariyaha ahi in uu iyada oo aan la garaynayn in uu dad si toosa iyo si dad-banba toona uu war uga duubo ,waxaa waajib ku ah wariyaha in warkasta iyo waraysi kasta oo uu qaadayo uu yahay mid si cad loo garanaayo qofka uu yahay iyo saxafadda uu ka socdo .
Waxaa danbi wayn ah in nin madaxa amma qofkasta oo bulshada ka tirsan saxaafadu ugu yeedho magac aanu raali ka ahayn isla markana aan la odhanin,Ilahayna sw waxa uu in badan Quraanka inoogu sheegay in ay danbi tahay in qof loogu yeedho naanays aanu lahayn raalina aanu ka ahayn.
Saxaafada waxaa lagu yaqaanaa dhawrsanaan ,daganaan,ixtiraam iyo hubsiimo dheeraad ah, shaqada saxaafadu maaha in aay qof daba gasho isla markaana ay raad-kurto oo aad jiif iyo joogba u diido.
Faa idada wariyaha :
Wariyaha caafimaadka qabaa waa sida waardiyaha dadka , waardiyuhu (waashmaanku) waa kan marka ay dadku wada seexdaan hantidooda iyo maalkodaba ilaaliya ,saxafaduna waata xilliga ay dadku wada seexdaan shar iyo khayr wixii dunida ka dhacay inoo soo gudbinaysa .
Qofkasta oo inaga mid ahi marka uu aroortii soo tooso ,isaga oo aan war iyo wacaal-toona hayn ayaa waxa uu shashadaha TV-yada ,websityada iyo joornalada ku arkaa wixii dhib iyo dheef ah ee intii ay hurdeen aduunka kusoo kordhay, waana arin u baahan in wariyaha loogu mahad celiyo.
Waxa kaloo jirta in dhalinyaradaasi isu xilqaantay wariya nimada aanay dhaqaale la taaban karo ku helin saxaafada, walibana ay u dheer tahay hagaar-daamo iyo hatigaad joogta ah oo ay ku hayaan siyasiyiintu .
Waynu ognahay oo caad inagama saarna in wakhtigan xaadirka ah ay saxafadu tahay mid wax badan oo wanaagsan inagu soo kordhisay,saxaafadu waxa ay ka hadashaa oo ay muujisaa cidkasta oo dawlada ka tirsan oo ay dhici karto in ay hantida qaranka si qaldan u adeegsato.
Balse waxaa ila fiican in aad looga taxadaro waxyabaha sumcada iyo sharafta saxaafada wax u dhimaaya, si ay saxafadeenu noqoto mid horumar la taaban karo samaysa .
Saxaafadu naxariista yay ka tagin:-
Waxyabaha aadka iiga yaabiyay waxaa ka mid ah ,waxa aad arkaysaa nin saxafi ah oo ka hawl galaaya goob shil amma qarax ka dhacay ,waxaaba laga yabaa in goobtaasi aanay joogin cid gurmad degdeg ah u fidisa dadkaasi dhibatadu ku dhacday ,saxafiguna uu yahay qofkii usoo horeeyay ee goobta yimi.
Sidaa awadeed ninkii saxafiga ahaa halkii uu dadkan dhibataysan gurmadka uga fidin lahaa waxaba laga yabaa qaar ka mida in ay mashquul ku noqdaan ,shaqadoodii ahayd in goobtaasi ay war kasoo duubaan kana soo diraan ,kadibna ay halkaasi ku nafwaayaan dad uu badbaadin kari lahaa Ilahay idamkii.
Waxaa aad arkaysaa nin wariye ah oo Kamaradii la dhex wareegaaya meel jab iyo hoog ka dhacay,mana aha wax inagu cusub waa arin maalin walba dhacda oo aan la dafiri karin.
Wariyuhu in uu shaqadiisa gutaa ma xuma ,balse talada ha ku darsado in mararka qaar aanu xaq u lahayn in uu dad dhaawac iyo dhimasho isugu jira cid gargaar u fidisana aan haysan ,waxaa waajib ku noqonaysa in uu dadkaasi badbaadiyo ,hadii labada shaqo isku dari karana waa hawlkarnimo dheeraada.
Ma jeclaysan lahayd wariye in adiga oo dhaawac ah oo dhiig bax u dhimanaaya , in nin wariya ahi inta uu kamarad kula kor istaago in maanta oo dhan marba dhinac kala wareego isaga oo sawiro uun kaa qadanaya ee aan dankale kaalahayn,kadibna aad halkaasi ku naf baxdo, waxa ay ila tahay waa maya ma jeclid.
Arintan aan ka hadlayo dhamaan saxaafada oo dhammi malaha ,balse waxa laga yaaba in dhalinyaro aan si fiican u taba-barayni ay sidan oo kale u dhaqmaan ,iyaga oo moodaya in saxafada ilbaxa ahi ay sidan u dhaqanto .
Saxafadu wayn inagu cusub tahay.
Dhulka Soomalida shaqadan saxaafadu waxa ay soo gaadhay xiliyadii gumaystayaasha ,wixii ka horeeyayna maynaan lahayn amma maynaan aqoonin waxa la yidhaahdo saxaafadan casrigaa ,waxa uun aynu wararka iyo barnaamij-yada isu gaadhsiin jiray qaab dhaqan iyo caado inoo ahaa sida gabayada iwm
In Saxafadu ay nooga timi wadamadaasi qalaad ,inaguna cusub tahay waxa aad ku garanaysaa kalmadaha aynu u isticmaalno dhamaantood waxa ay kasoo jeedaan luqado qalaad sida Carabiga iyo Ingilishta ,tusaale ahaan ereyga Saxaafad (saxaafi) iyo Joornaal (journalism) .
Hadaba waa maxay saxaafadi ? saxaafadi waa xirfad iyo shaqo u xilsaaran in ay bulshada usoo gudbiso warar ,faaloyin iyo barnaamidyo kasta oo dadka iyo mujtamacu ay aad u danaynayaan,sida Diinta ,wararka ,faalloyinka ,sheekooyin cayaaro, khudbado,mada-daaloyin iwm.
Saxaafadu waxa ay adeeg-sataa aalado kala wada duwan oo ay dadka warka kusoo gaadhsiiso sida, TV-yada ,qoraalo lagu soo daabaco websit-yada, filimado, sawiro, jaraa'id, buugaag iyo wax kasta oo sahlaaya in bulshadu ay heli karto fariintaasi .
Khasab maahan in qofka suxufiga ahi uu waxbarasho heer jamacadeed leeyahay waayo aduunka wariyayasha ugu waawayn qaar ka mida malaha aqoon jamacadeed ,balse waa dad dadaal iyo hawlkarnimo ay daacad nimo ku dheehan tahay sameeyay,waxaa khasab kugu noqonaysa in aad khabrad ka raadsato hay-adaha ku shaqada leh iyo ururada qaabil san.
Hadaba saxaafada iyo suxufinimaddu waa shay muhiim ah una baahan masuuliyad dheeraada iyo aqoon xirfadeed ku saabsan shaqadaasi saxaafada , waayo waxa ay saameyn wayn ku dhex leeyihiin dad waynaha aduunka oo dhan iyo bulshada ay sida gar ka ah ugu adeegaan.
Sidaa awadeed waxaa fiican in qofka suxufiga ahi rag iyo dumar midkuudoono ha ahaadee uu faham-sanaado masuliyada gaarka ah ee ay leedahay xirfadani ,si aanay waxyeelo usoo gaadhin bulshada , iyaguna ay uga nabad galaan.
Waxa aad in badan warbaahinta ka maqlaysaa erayga xorriyatul qowlka amma madaxbannaanida saxaafada ,tasoo aas-aas u noqotay in qaar badan oo ka mid ah saxaafada madaxa banaan ay u adeegsadeen si ka baxsan anshaxa iyo akhlaaqda saxaafada looga bahan yahay.
Aduunyada ma jiro lana soo helimaayo wadan amma dal dhamaan ay saxafadu waxa aydoonto ay samayso ,erayga ah xoriyad waxa uu ku qaydan yahay in saxafadu ay xor u tahay soo gudbinta waxkasta oo bulshada wax u taraaya.
Waa ay jirtaa oo lama dafirikaro in wadamada reer galbeedku ay saxafadahooda waxuun xoriyada ay marka ay doonaan ay siyaan balse hadana iyaga laftoodu waxa jira xuduud aanay dhaafi karin oo xakamaynaaya.
Hadaba inagu waxa aynu nahay dad muslim ah,waana loo baahan yahay in saxafadeenu ay ka diwanaato saxafadaha reer galbeedka ,waana in saxafadeenu saldhiga ay ka duulaysaa uu noqdaa diinteena islaamka, madamaa wadankasta saxafadiisu ay ku sal leedahay fikirka iyo maba-diida ay aminsan-yihiin.
Akhriste si aynu u helno suxufi amma saxafiyad wanaagsan waxa aynu u baahanahy in aynu marka hore ka fikirno sidii aynu ku heli lahayn qofkii shaqadan u qalmi lahaa kaasi oo leh astamahan hoos ku qoran.
1.Qof masuulidka qaadi kara ,fahmina kara xilkan saxafada ee uu hayaa in uu yahay mid maalinta aakhiro Ilahay kala xisaab tamaayo.
2.Qof Hal-abuur leh , mihindisa wax saadaalinkara ,indheer garadna ah .
3. Qof wax ka yaqaana tariikhda aduunka iyo xidhiidhka guud ee caalamka iyo juqaraafiga.
4. Qof wax kala socda siyasadaha aduunka iyo waxa lakala macaashaayo ,ee aan ku koobnayn oo kalya gobolka uu degen yahay iyo xaladahiisa .
5. Qof leh dulqaad badan ,waayo waxa aad marar badan iska hor imanaysaan siyaasi sumaysan kasoo loo baahan yahay in aad taxadarkaaga yeelato.
6. Qof leh dareen foojigan ,waayo war aad sii daysay amma fikir iyo afkaar aad leedahay oo warbaahin ku baxday ayaa bulshada qaar ka midii ay si kale u arki karaan kuwaasoo cadaw kuu noqon kara.
7. Qofka wariyaha ah waxa looga bahan yahay cadaalad iyo daacadnimo ,sida uu xeerka saxafadu dhigaayo hadii aad hal qof amma hal koox aad waraysato waxa iyada kugu waajib ah in aad iyadana waraysato cida kale ee kasoo horjeeda.
8. Qofka wariyaha ahi waa sida askariga ,waxa looga bahan yahay in uu markasta u taagnaado soo gudbinta dhacdooyinka aduunka iyo wararka iska-soo daba dhacaaya .
9. Waa in uu si fiican u yaqana afka Somaliga ee uu rabo in uu barnamij yadiisa ku gudbiyo ,haday tahay qoraal iyo haday tahay hadalba.
10. Waa in uu ku dadalaa in uu markasta wararkiisa iyo barnaamijyada uu umada usoo gudbinayaa in ay noqdan kuwo xaqiiqda ku qotoma.
Saxaafadu waa u adeegaha bulshada waana macalimka dadwaynaha ,sidaasi awadeed ayaa waxa looga bahan yahay in ay saxafadu noqoto macalin wanaagsan si ay dadkuna u noqdaan arday wanaagsan.
Saxafiyoow waxa aad sidataa seef laba afleh ,markaa waxa lagaga baahan yahay in aad dhinaca wanaagsan u adeegsato oo aanad u adeegsan dhinaca sharka,isku dirna iyo iska horkeenka bulshada.